तपाईंहरूको दिन कस्तो रहला आजको तपाईंहरूको राशिफल हेर्नुहोस्-/वि.सं. २०७५ फाल्गुण २७ गते सोमबार तदानुसार ११ मार्च २०१९
श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल फाल्गुन २७ गते सोमबार इश्वी सन् २०१९ मार्च ११ तारीख फाल्गुन शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथी भरणी नक्षत्र ऐन्द्र योग १४ः०७ बजे सम्म पश्चात वैधृति योग वव करण चन्द्रमा मेष राशिमा आनन्दादि योगमा चर योग सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु –ज्यो.पं. सरोज घिमिरे/धनकुटा खबर ।
पारीवारिक साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ ।
कार्यसम्पादनमा झन्झट हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । नयाँ योजनाका साथमा गरीएका कामहरु सफल हुनेछन । मनोबिलासिताका सामानहरुमा सामान्य खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला ।
मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । नयाँ मित्र सगँको भेट वा प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको सानो कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्ने छन् । नयाँ कामको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ ।
कार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । मान्यजनको सहयोगमा गरीएका कार्यले दीगो फाईदा दिलाउनेछ । अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ ।
सामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय ब्यतित हुन सक्नेछ । बिलासीताका सामानको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बिश्वसघात हुन सक्छ ।
स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला । आजको सामान्य खर्चले भोलिलाई फाईदा मुलक हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला प्रतिस्पर्दाजन्य कार्यमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ । प्रिय ब्यक्ति को भेटले मन प्रशन्न रहला ।
बिद्या तथा सन्तान शुख प्राप्ति हुने योग रहेकोछ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । कार्य क्षेत्रको गडबढीले गर्दा मनमा सामान्य डरको बास रहनेछ ।
ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग मा समय ब्यतित रहन सक्छ । मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर प्राप्त रहनेछ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला ।
साजेदारी काममा लगानी नगरैकै बेश हुनेछ । बोलिको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहन सक्छन् । मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि आई पर्न सक्नेछ ।